Galatiana 5:1 "Ho amin’ ny fahafahana no nanafahan’ i Kristy antsika; ka tomoera tsara, fa aza mety hohazonin’ ny zioga fanandevozana intsony."
Dia mbola faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanany anie hoaminareo mandrakariva.
Izany indray ry havana malala ny tenin'Andriamanitra tonga amiko sy aminao amin'ity andro anio ity. Jesosy Kristy tamin'ny nanirahan'Andriamanitra Azy ho ety amin'izao tontolo izao ity dia tonga hamonjy antsika zanak'olombelona, fa tsy tonga nanameloka antsika akory. Nitondra ny fahalementsika, nitondra ny aretintsika rehetra Izy, nitondra ny olantsika, nitondra izay rehetra tsy ahitantsika ny tavan'Andriamanitra indrindra indrindra fa ny fahotana; izay sakana lehibe indrindra tsy ahitantsika ny voninahitr'Andriamanitra ary sakana lehibe ihany koa eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara mazava tsara fa naniraka ny Zanany lahitokana Andriamanitra mba hisolo antsika ho eo amin'ny Hazo Fijaliana. Ny olona izay fantsihana amin'ny hazofijaliana mantsy ry havana dia olona voahozona. Koa tsy nampaninona an'i Jesosy Kristy Tompontsika ny voahozona noho ny otantsika, noho ny helontsika; mba ahafahantsika mihaona sy manakaiky an'Andriamanitra bebekokoa.
Inona moa no ataohoe fahafahana, ny atao hoe fahafahana raha hadihadiana ny fototeny amin'izany dia hoe "afaka", Ny afaka dia tsy misy sakatsakana, malalaka, miala, mitsoaka, votsotra, miongotra, miendaka, mikipaka, lasa, misindaka, mihintsana, miraraka. Izay no famaritana vitsivitsy ny atao hoe "afaka". Izany hoe ny olona afaka izany dia olona efa niala teo amin'ny toerana iray izay nangeja azy ka tonga amin'ny toerana iray izay tontolo hafa mihistsy. Hitondra ohatra iray amintsika aho hitarihana ny saintsika amin'izany. Misy olona iray tao anatin'ny fiaraha-monina izay nisy azy, nisy anefa ny zavatra tsy nety nataony tao anatin'izany fiaraha-monina izay nisy azy izany, ka nanao fandikan-dalàna teo amin'ny mpiarabelona taminy izy. Tonga ny fitsarana dia nampidirina amponja izy avy eo, ao anatin'io fonja io ny olona iray dia tsy afaka manao izay tiany hatao, fa dia manaraka ny fitsipi-pifehezana, tsy manana fahafahana, tsy manana fahalalahana, fa ny tompon'andraikitry ny fonja no manao izay tiany atao aminao. Tsy manam-pidiny, raha misy manatitra sakafo aza dia mbola jerena, arahina maso mandrakariva, mipetraka amin'ny trano tery sy hety, maloto, tsy zarizary. Izany no iainan'ny olona ao anatin'izany figadrana izany na ny fonja izany; tsy dia mahita masoandro firy. Fa rehefa tonga kosa ny fotoana izay hivoahany izany fonja izany ka mivoaka ny faritra izay nitazonana azy ilay olona dia izay izy no atao hoe olona afaka. Koa izany no mahatonga an'Andriamanitra nandefa an'i Jeosy Kristy hamonjy antsika ka mba ahazoantsika fahafahana, satria avy amin'ny alàlany ihany no ahazoantsika izany fahafahana izany araha ny voalaza eo amin'ny Galatiana teo hoe "Ho amin'ny fahafahana no nanafahan'i Krisry antsika". Isika izay voagejan'ny fahotana, izao tontolo izao, nefa tsarovy ry havana fa izany fatotra izay mahazo antsika izany dia avy amin'ny devoly irery ihany. Koa eto aho dia mampahafantatra antsika, fa ny tenin'Andriamanitra irery ihany no afaka manafaka antsika sy ny fandraisana an'i Jesosy Kristy ho Mpanapaka ny fiainantsika , satria araka ny tenin'Andriamanitra hoe "Izay mandray Azy dia omeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra". Eto ihany koa te hisarika ny saintsika fa izao tontolo izao dia mamitaka antsika, entiko hisarihana ny saintsika ny amin'izany dia ny tenin'Andriamanitra ihany izay hitantsika ao amin'ny Mpitoriteny 8:8-17. Manambara izany fa ny fahalehibeazan'Andriamanitra dia tsy takatry ny saintsika olombelona izany, ary voafetra ny saintsika ny fahafantaran'ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanoa sy ny fiainako, fa mila matoky sy mino isika dia ny fianoanan'i Jesosy irery ihany ho Tompo sy Mpamonjy antsika. Tian'Andriamanitra hanana fahafahana satria ny zanak'Andriamanitra dia eo ambany fahasoavana, fa tsy ao ambany lalàna. Ny fahasoavan'Andriamantira no eo amintsika mandrakariva, manana filamiana isika, manana fiadanana isika satria ilay tena Mpanjakan'izao rehetra izao no miaraka amintsika.
koa raha mandalo olana isika, na mandalo ady sarotra, ny zanak'Andriamanitra dia tsy mba mandalo izany, satria manankarena ny Tompontsika, azy izao rehetra izao, tiantsika ny Tompo koa miorena tsar aza miova fa tia anao Izy, nomen'Andriamanitra fahafahana isika tamin'ny nanomezany ny zanany Lahy tokana mba hamonjy ahy sy ianao. Tena tia antsika Izy ka mbola miala nenina mandrakariva. Koa rehefa afaka isika dia andeha ihany koa hanafaka ireo manodidina antsika, asehoy azy fa tian'Andriamanitra hovonjena ihany koa izy. Koa meteza àry ho fitaratra sy fanitnonana ny hafa eo amin'ny manodidina anao sy ny mpiara-belona aminao ianao ka izany mahatonfa ny Tompo miteny amintsika araka ny voalaza ao amin'ny 1 Korintiana 8:9.
Koa inona àry no atao mba ahazoantsika ny fahafahana?
Efa nambaran'Andriamanitra tamintsika teo fa naniraka ny Zanany Lahitokana Izy mba hahazoantsika ny fahafahana, ary manaraka izany raha niala tety ambonin'ny tany jesosy dia naniraka ny Fanahy Masina indray izy mba ahafahaan'ny olona mitoetra tsara amin'ny finoana an'Andriamantra, ka io no mampianatra sy manolo-tsaina ny olona mba handeha amin'ny làlan'ny fahamarinana sy ny fahamasinana araka an'Andriamanitra. Araka ny voalaza ao amin'ny 2 Korintiana 3:16-18. Koa izany no mahatonga antsika hahita ny tavan'Andriamanitra sy ny voninahiny. Koa "mitomoera tsara, fa aza mety hahazonin'ny zioga fanandevozana intsony". koa manomboka anio, esory eo amintsika ny zioga ny fahotana, aza manaiky ny ho andevozin'ny satana intsony, ialao ny fanaon'izao tontolo izao izay mamatotra antsika ka tsy ahitana ny voninahitr'Andriamanitra. Fa tia antsika Izy, ary miaro antsika amin'ny tànan''ny fahavalo. Koa miverena amin'ny Tompo, manompoa Azy, ataovy ny asany, mijoroa vavolombelona mandrakariva fa tsara ny Tompo. Ary miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainantsika io Andriamanitra io. Andriamantra velona Izy, tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Koa miorena tsara aza miova, dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Mangataha ny Fanahy Masina mandrakariva hampianatra antsika ny làlana, ka ahatongavantsika any amin'ny fiainana mandrakizay. Mangataha amin'Andriamantra mandrakariva sy amin'i Jesosy Kristy Tompo, ny famindrampony satria izany no antony ahavelomantsika. Koa mifalia àry fa olon'afaka ianao izao, Indro raiso Jesosy ho Tompo sy Mpamonjy ny fiainanao, ampanjakao amponao Izy, aza avela handalo fotsiny na apetraka eo ambaravarana fa ampidiro, avelao honina ao anatintsika. Dia ho tena afaka tokoa ary hiara-paly amin'ilay Tompo sy Mpanjakantsika ao amin'ny voninahitra.
Koa ny dera sy ny laza ary ny voninahitra anie dia ho an'Andriamantira irery ihany.
Mahatsapa ianao fa tena afaka tokoa, dia andeha isika hiara-hanandra-peo amin'ity hira iray ity, mino aho fa tena hainao ity hoe:
AFAKA NY GADRAKO (AFAFI Taninanandrano)
Afaka ny gadrako
maivana ny ziogako
lasa ny haizina fa tonga ny mazava
dia ilay Jesosy tia
teraka hamonjy ahy ety
Efa nosoloiny izao
Ity lamba rovitra
fitafiana vao nomeny mba ho ahy izao
Ho mendrika satria ny fanjakany ho doria
Menatra aho, menatra aho
Ry Tompo ô!
Noho ny ratsy zay efa vitako
Tsy mendrika aho nefa avelao raha sitrakao
mba hitoetra eo an-tongotrao
tsy nety Ianao
fa noraisinao ny tànako
nofafànao koa ny ranomasoko
ka toa sambatra ery ’ty fo
Afaka tokoa ny Gadrako.